West Ham oo danaynaysa Wilfried Bony kaddib markii ay waayeen Carlos Bacca - BBC News Somali
West Ham oo danaynaysa Wilfried Bony kaddib markii ay waayeen Carlos Bacca
Image caption Wilfried Bony ayaa 2013 noqday ciyaaryahankii ugu qaali sanaa ee ay soo gadato kooxda Swansea iyaga oo 12 milyan oo gini ka soo siistay kooxda Vitesse Arnhem
Tababaraha kooxda West Ham, Slaven Bilic ayaa sheegay in uu danaynayo in uu soo saxiixdo Wilfried Bony oo afka hore uga dheela Manchester City, balse uusan qofna "baryi doonin" si uu kooxda ugu soo biiro.
Ciyaaryahanadooda afka hore uga dheela ee Andy Carrol iyo Andre Ayew oo ah ciyaaryahankii ugu qaali sanaa ee ay abid soo gataan ayaa ka dhaawacmay, inkastoo tababarahan reer Croatia uu qirtay in uu qarka u saran yahay in uu soo sixiixdo Carlos Bacca oo AC Milan u dheela.
Balse ciyaaryahankaas reer Colombia ayaa doortay in uu sii joogo Talyaaniga, Bilic ayaanse u jeedin in uu sii dabo socdo ciyaaryahankaas dhaliyaha ah sababtoo ah wuxuu sheegay in ay jiraan ciyaaryahanno kale oo ay danaynayaan soona waca maalin kaste.
Bilic wuxuu sheegay in uu isaga ahaa "qofkii wacay ciyaaryahanka saddex todobaad isaga oo Austria jooga" wuxuuna ku daray in uu " doonayay in uu soo iibsado balse uusan rabin in uu ciyaartoy soo qasbo".
Wuxuu sheegay in kooxdiisu aysan ahayn Real Madrid ama Manchester United balse ay yihiin koox wanaagsan oo isku kalsoon ayna haystaan ciyaaryahano ku qanacsan in ay kooxda u dheelaan, sidaas daraadeedna aysan qofna baryaynin si uu ugu safto.
Bilic wuxuu sheegay in Bacca uu "lacag badan haysto uuna rajaynayo in uu herkaas sii joogo" laakiin uu filayo in West Ham ay soo jiidan doonto mustaqbalka ciyaaryahanno tayadiisa oo kale leh, Bony-na uu ka mid yahay.
27 jirkaas ayaa Manchester City ku soo biiray bishii koobaad ee sanadkii 2015-kii wuxuuna u dhaliyay 10 gool isaga oo 20 ciyaarood lagu bilaabay laakiin wali ma uusan safanin xilli ciyaareedkan.